Dagaal DHAQAALE dalku ma xammili karo! – Bashiir M. Xersi
Date: 10 Feb 2016Author: Bashiir M. Xersi 1 Comment
Dal ahaan waxaan nahay, bar ku taal, oog istiraatiiji ah, haddana, hodan ka ah, walxo badan, oo dunidan hormartay baahi badan ay u qabto, oo ka badan, inta aan anagu uga baahan nahay, kana baahan nahay aragti, aqoon iyo oomato intaba.
Hore, intii dawladuhu jireen iyo ka dibba, dalka waxaa ka jiray dagaallo u dhexeeya dawladaha danaha ka leh dalka. Dad badan ayaa qaba dilkii MW Cabdirashiid Sharmarke, haba dilo wiil Soomaaliyeed, oo qabyaalad loo soo adeegsadaye, waxaa ku lug lahaa FPIda Maraykanka, maadaama aan xilligaa si toos ah ugu biirnay garabkii kale, ee hantiwadaagga, halaaggana noo horseeday.
Marka laga reebo is diidka meelaha, damaca sabsablaha iyo sedbursiga qabiillada ay dabada ka riixayeen quwado shisheeye, ee si muuqda ama si qarsan ugu hawllanaa, in aan dalka amni, xasil, nabad iyo degaansho ka dhalan.
Dillaacii daacuunka wadaaddada waallidu wadday iyo curashadii malleeshiyaadkii afduubanaysay badi maraakiibta baddeenna iyo badweynteenna, sida sharcidarrada ah uga jillaabta, waxay horseedday, in illawshii dunida ay dhan is ka dhigtay galkeenna dib boorka looga jafo, si looga hortago mar kale qatar ay u arkeen in ay halis ku tahay dhaqaalahooda iyo danahooda, ee ma ahayn mida ay anaga noogu danaynayeen.
Sidii ay saaxada dalkeenna u soo gashay dawladda Turkiga iyo labadii booqasho ee marna uu RW ahaa Agosto 2011 marna MW ahaa gennaayo 2015, ee mudane Ordogan, waxay isbaddal weyn ku samaysay muuqii, magacii, muunaddii iyo miisaankii dalku ku lahaa dunida.
Magaaladii loo yaqaannay magaalada ugu qatarsan dunida ee Muqdisha, shirkadda duullimaadka Turkiga ayaa ka billowday socdaallo, oo dunida inteeda kale ku xirtay. Magaalda waxaa laga furay in ka badan 40 danjirto iyo tiro kale oo wakiillo dawladood ah.
Amnigii wuu soo roonaaday, magaaladii nolol iyo naruuro ayaa ka billowday, dhisme, dayactir, dib u ugu laabasho iyo maalgashi ayaa ka hirgalay. Sida hore u dhacday, waligeedna dhici jirtay, had walba fursadaha na soo mara ka ma faa’iidaysanno!
Qaraxa diyaaraddii Daalo la la damacsanaa, in lagu qarxiyo, ee Eebbe ka badbaadshay –waa halka laga yiraa; Dadaqaa ku hagoogataye!- wuxuu billow u yahay DAGAALKA DHAQAALAHA, ee nagu soo food leh. Sidan waxaan u leeyahay, dagaalkii qalqalinta, qalaalase abuurka iyo qaarijinta waxba waa ku hakan waayeen, oo noloshu u ma istaagin, marka waa in halbawlayaasha dhaqaale iyo kaabayaashooda la beegsadaa.
Qofka qaraxa diyaaradda la raacay, beel, deegaan iyo maamul walba ha u dhashee, waxaa hubbanti ah, haddii uusan heli lahayn, qof ka gudbiyo kontoroollada, in uusan diyaaradda la raaceen. Yaa dhibban, qof nafti hallig u ah, si uu amni u qarbudo, mise, kan amniga la qarbudayo xil ka haya, ee waliba ku nool, haddana, looluush ka qaatay?.
Tan ka muhimsan waa, in dagaalka aysan Soomaali kali ku ahayn, ee uu dhinacyo badan yeelan karo. Sida aan la wada soconno, xiriirka Turkiga iyo Imaaraadka ma wanaagsana, maxaa diiday, in uu saamayn nagu yeesho? Sidoo kale, xiriirka Turikiga iyo Ruushka ma fiicna, haddaba, maxaa diidaya, in uu raad nagu reebo?. Bal qiimee, labadan toddobaad, ee aysan imaan diyaaradda Turkigu, meeqo lacag ah ayey qarsaareen? Hadday sii socoto, meeqo ayey sii qaraasi karaan?.
Si kale, ma la dhihi karaa, qaraxa, fududeyntiisa iyo abaabulkiisa Imaaraad ama Ruush ayaa raad ku leh, oo wax ka maleegay? Iyaga ka ma ahan Soomaali ku xumee, balse, miyeysan dhici karin, in ay Turkida ku xumaynayaan, si ay nabar u gaarsiiyaanna, ay anaga noo soo mareen, noona adeegsadeen; mid waqooyi ka yimid ama laga keenay iyo mid koofur joogaba?.
Waxaad ogaataa, qof walba, oo raba, in garoonka Muqdisho uu xirmo, waa qof raba, in uu la dagaalo dhaqaalaha Turkiga ee ay duullimaadka dalka ka sameeyaan. Inta duullimaadka Muqdisho ay joojin leheed, si ay Hargaysa uga billowdo, maxaa diidaya, in ay labada duullimaadba samayso, haddii ay heli karto rakaab? Ma filayo, in ay raalli ku yihiin ama ku faraxsan yihiin Turkidu joojinta duullimaadkeeda Muqdisho, ee mar walba danta iyo duruufta ayaa ku dabarta!
Run ahaan, aniga waxay i la tahay, hadda wixii ka dambeeya faldamiyeedyada badi dalka ka dhici doona, in ay u badnaa doonaan DHAQAALE iyo kuwo daba ku haya dano dhaqaale, si dadban iyo si toos ahba. Waa hubbanti, in dalku uusan xammili karin dagaal caynkan ah, ee way habboon tahay, in la la yimaad aragti iyo aqool looga hortago.
Previous Previous post: Dilayaal ka la darajo sarreeya!
Next Next post: Haddii WIILKU yahay WADDANI maxaad tahay WAAYEELOOW?!
One thought on “Dagaal DHAQAALE dalku ma xammili karo!”